लोकदोहोरी गायक बिष्णु खत्रीले ल्याय यथार्थ मर्मस्पर्सी दशै गित रिनै रिनको ! -
रुपन्देही । हिन्दुहरुको महान चाड बडादशैं हाम्रो घर आगनीमा बिस्तारै नजिकिदैछ तर हाम्रो अवस्था अतेन्तै नाजुक भएको छ कोरोना करहले। आफ्नो घर परिवार देखि बर्षौ देखि छुट्टीएर बसेका ती प्रदेशी दाजुभाइहरु चाडबाड नजिकिएसँगै घर आउनेहरुको ताती हुनुपर्ने थियो तर बिडम्बना बिश्व महामारिको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण अहिलेको चाडपर्व करिब करिब एका घर हुने पक्का पक्की छ।
यहि अबस्था रहदा रहदै दशै लक्षित गीतहरू पनि बजारमा आउन थालेका छन् । त्यस मध्य एक हो बिष्णु खत्रीको “रिनै रिनको” महान चाड बडादशैंलाई एकै ठाउँमा भेला भएर एक समुदायमा एकैसाथ रमाइलो गर्ने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ बडा दशैलाइ। आशीर्वाद थाप्ने र रमाइलोको रौनकलाई दशैं तिहार विशेष गीतले पनि छुट्टै रौनकता थप्ने गर्दछन ।
लोकदोहोरी गीत प्रेमी आमश्रोता, दर्शक चाडवाड नजिकिदै गर्दा यस्तै गीत संगीतको बेग्लै प्रतिक्षामा रहन्छन् लोकगितका श्रोताहरु । नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा आफनो विशिष्ट पहिचान बनाएका कलाकार मध्येका एक हुन बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्री ।
बागलुङको साबिक मल्म गा.बि.स. र हालको गलकोट नगरपालिका ७ मल्ममा जन्मेका बिष्णु खत्री लामो समयदेखि लोकदोहोरी क्षेत्रका सकृय र आम जनमानसमा अतेन्तै रुचाइएका सदाबहार गायक हुन खत्री । सिसा टल्केको गीती एल्वमबाट आफनो सांगितिक यात्रा तय गरेका खत्रीले नेपाली गीतसंगीतको बजारमा हजारौं गीत श्रोता सामु प्रस्तुत गरिसकेका छन ।
हरेक विषयवस्तुलाई गीत संगीतमा उतार्न सक्ने खुबी भयका गायक हुन बिष्णु खत्री । उनले लोकदोहोरीमा आफुलाई निकै अब्बल सावित गरिसकेका छन गायकहुन बिष्णु । कलाकारितामा हुनपर्ने अब्बल गुण भएका गायकको रुपमा चिनिन्छन खत्री । आफनै लय, शब्द, र स्वरमा विभिन्न परिवेशलाई अन्कित गर्दै बजारमा कहिले भरिया, कहिले बेपत्ता परिवार, कहिले किसान, कहिले लाहुरे, कहिले विदेशमा रहेका नेपालीको पिडा, कहिले छुवाछूतका त कहिले माया प्रेमसँगै सहिदका सपना लगायतका गीतहरु मार्फत नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा एक नक्षत्रको रुपमा स्थापित भईसकेका गायक हुन।
वि.सं. २०५७-०५८ तिरबाट गीत संगीतमा प्रवेश गरेका गायक खत्रीले दशैं तिहारमा प्रत्येक वर्ष नयाँ गीत श्रोता माझ प्रस्तुत गर्दै आउने गर्र्दछन । यसैक्रममा यसपालीको दशैंमा पनि विल्कुलै नयाँ गीत “रिनै रिनको” बजारमा ल्याएका छन् । आफनै युट्युव च्यानल (बिष्णु खत्री ) मार्फत उक्त गीत उनले आईतवार विहान रिलिज गरेका छन् । गीत रिलिज भएको केहि घण्टामै आमश्रोता दर्शकको उल्लेख्य माया पाएको छ यो सालको दशै गित “रिनै रिनको”ले।
गायक खत्रीले बजारमा ल्याएका सबैजसो गीतमा आफ्नै शव्द, स्वर र लयमा रहेको पाइन्छ र अहिलेको गितमा पनि तेहि निरन्तरता देखिन्छ।
गीतले नजिकिदै गरेका दशैलाइ हाम्रो परिवेश अनि समाजको वास्तविक विषयवस्तु उठान गरेको छ। आइतवार सार्वजनिक भएको दशैं गीत रिनै रिनको गीतको म्युजिक भिडियो पनि निकै मर्मस्पर्शी देखिन्छ । नेपालको समाजको वर्षौ देखिको रेमिट्यान्समा बाँच्नुपर्ने विवशतालाई जिवन्त ढंगले गायन र भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । उसो त खत्रीका यस अघिका भरिया दाइ, किसानी दाइ, कि सास चाहियो, कि लास चाहियो जस्ता दर्जनौ गीतहरु पनि सामाजिक यथार्थतासँगै जोडिएर आएका छन् । नेपाली लोक संगीतमा लामो समय चर्चाको शिखरमा रहेका गायक खत्रीले कोरोना संकटका बीच नेपालीको बाध्यतालाई दर्शक श्रोता माझ ल्याएको बताए । खत्री यस्ता कलाकार हुन्, जसले आफ्ना सबैजसो गीतमा शव्द, लय र आवाज आफै कुशलतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने सामथ्र्य राख्छन् ।
यो गीतमा शव्द पनि उत्तिकै हृदयस्पर्शी छ ।
ढोका खोल भन्नेछु म आए
हेर्नै छोडे आफ्नो मुख ऐनामा